Isingeniso ku-Eratosthenes: UYise weJografi
Umphengululi wesiGrike u-Eratosthenes (u-276 BCE ukuya ku-195 BCE) ubizwa ngokuba "nguyise wendalo," ngenxa yokuba wayeyilwe njengengqeqesho yomfundi. U-Eratosthenes wayengowokuqala ukusebenzisa igama elithi geography kunye neminye imiqathango esasetyenziswa nanamhlanje, kwaye wayenombono omncinci weplanethi ngaphakathi kwimbono ephezulu yendalo yonke eyenza indlela yokuqonda yethu yangoku.
Phakathi kokufezekiswa kwakhe kwakunokulinganisa kwakhe ngokungenakunqwenelekayo kwinqanaba lomhlaba.
Ngcaciso emfutshane ye-Eratosthenes
U-Eratosthenes wazalelwa malunga ne-276 BCE kwikoloni yaseGrisi e-Cyrene, intsimi ehlala kwindawo ekhoyo namhlanje. Wayefundiswa kwii-academy zaseAthene waza wanyulwa ukuba asebenze iThala leMkhulu eAlexandria ngo-245 BCE nguPharoah Ptolemy III. Ngoxa wayekhonza njengomthala-ntloko kunye nomfundi-mfundi, u-Eratosthenes wabhala ngokubanzi malunga nehlabathi, ebizwa ngokuba yiJografi . Oku kwakukusetyenziswa kokuqala kweli gama, elithetha ngesiGrike ukuba "ukubhala ngomhlaba." IJografi nayo yazisa iingcamango zengqungquthela yezulu, epholileyo kunye neleyo.
Ukongezelela ekudumeni kwakhe njengemathematika kunye ne-geographer, u-Eratosthenes wayengumfilosofi onobuchule kakhulu, imbongi, i-astronomical and theorist. Njengomphengululi wase-Aleksandriya, wenza inxaxheba emininzi kwi-sayensi, kubandakanywa ukuqaphela ukuba unyaka ungaphantsi kweentsuku ezingama-365 kwaye ngoko ke ufuna usuku olongezelelweyo kwiminyaka emine ukuvumela ikhalenda ukuba ihlale ihambelana.
Ebudaleni, u-Eratosthenes waba yimfama waza wafa ngenxa yendlala yecala lokuzilalisa ngo-192 okanye ngo-196 BC. Ngaloo ndlela wayeneminyaka engama-80 ukuya kuma-84 ubudala.
I-Eratosthenes Iingqobhoko eziBalulekileyo
Isibalo esibalulekileyo kakhulu semathematika apho u-Eratosthenes anqume khona ukujikeleza komhlaba kuyinto ebalulekileyo yeso sizathu sikhumbula kwaye sibhiyozela isandla sakhe kwisayensi.
Emva kokuva ngequla elinzulu e-Syene (kufuphi neTropic yeCancer kunye nosuku lwe-Aswan namhlanje) apho ilanga liye lashayela phansi emthonjeni we-summer solstice, u-Eratosthenes wenza indlela awayekwazi ngayo ukubala ukujikeleza komhlaba geometry eyisiseko. (Abaphengululi bamaGrike babesazi ukuba umhlaba ngokwenene yayingummandla.) Inyaniso yokuba u-Eratosthenes wayengumhlobo osondeleyo wezibalo sezibalo zeGrike i-Archimedes mhlawumbi esinye sezizathu zokuphumelela kwakhe ekubaleni. Ukuba akazange asebenzisane ngokuthe ngqo kunye no-Archimedes kulo msebenzi, kufuneka ukuba uye wancedwa ngobuhlobo bakhe kunye novulindlela omkhulu kwi-geometry kunye ne-physics.
Ukubala umjikelezo womhlaba, uEratosthenes wayedinga imilinganiselo emibini ebalulekileyo. Wayazi umgama ophakathi kweSyene neAleksandria, njengoko kulinganiswa ngamakhansela abanjwe ngamakamela. Emva koko walinganisa i-angle ye-shadow eAleksandriya kwi-solstice. Ngokuthatha i-angle ye sithunzi (7 ° 12 ') kwaye uhlule kwidireji ezingama-360 zesangqa (360 ehlukaniswe ngu-7.2 ivelisa ama-50), i-Eratosthenes inokuphindaphinda umgama phakathi kwe-Aleksandriya ne-Syene ngo-50 ukuchonga umda mhlabeni.
Ngokuphawulekayo, u-Eratosthenes wancuma ukuba i-circumference ibe ngamamayela angama-25 000, iikhilomitha ezingama-100 kuphela kwi-equator (ii-24,901 miles).
Nangona u-Eratosthenes wenza iimpazamo zeemathematika ekubaleni kwakhe, le ngxowankulu yaxoswa kunye kwaye yavelisa impendulo enembileyo eyona nto ibangela ukuba izazinzulu zizimangalise.
Emashumi ambalwa emva kamva, umGriographer waseGrisi uPosidonius wagxininisa ukuba u-Eratosthenes wayemkhulu kakhulu. Wabala i-circumference yakhe kwaye wathola umlinganiselo weekhilomitha ezingama-18 000 - iikhilomitha ezili-7,000 ezimfutshane kakhulu. Ngexesha eliphakathi, abaninzi abaphengululi bamkela u-Eratosthenes, nakuba uChristopher Columbus wasebenzisa iPorsidonus ukuze aqinisekise abo baxhasi bakhe ukuba angakwazi ukufikelela eAsia ngokukhawuleza ngokuhamba ngentshonalanga eYurophu. Njengoko ngoku siyazi, le nto yayiyiphutha elibalulekileyo kwinqanaba likaColumbus. Ukuba wayesebenzisa u-Eratosthenes esikhundleni sakhe, uColumbus wayengazi ukuba wayengekaye e-Asia xa efika kwiLizwe elitsha.
Imfazwe yaseVietnam: F-8 Crusader
Funda indlela yokusebenzisa i-Mood French Conditional
Ukusebenzisa i-'Se 'njengelilingana nelizwi lesiNgesi elithi Passive Voice
Indlela yokuBamba iPalette ye Paint
Ubomi nokufa kwePontiac: Ibali lovavanyo kunye nephutha
Ngaba le miRhymes yeClassical Nursery kunye neLullabies yavela phi?
I-Television yaseJamani eNyakatho Melika
Education Online 101
I-18th Century Umlinganiselo: 1700 - 1799